Bogga rasmiga ah: TrueCrypt
Faallo ku saabsan TrueCrypt
TrueCrypt Xirfadaha la xiriira
QQ 2.11 International iyo 6.4.12593 ...
Tool inuu ciyaaro kulan ku consoles’ka ciyaarta GameCube iyo Wii. Software ayaa wanaajinaya tayada image iyo awood u ah in la isticmaalo joysticks ciyaaraha ka.
Q-Dir 7.37 Standard iyo Portable
Software in ay ka shaqeeyaan la xisaabta kala duwan. Qalab badan iyo qaybaha si ay u abuuraan garaafka waa kuwo la heli karo si user ah.
Tifaftirayaasha warbaahinta, Ciyaartoyda warbaahinta
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu tijaabiyo waxqabadka nuqulada adag. Software wuxuu cabbiraa xawaaraha akhriska iyo diiwaangelinta qaybaha kala duwan ee cabbirka qiyaasta ah.